China Sandblast Glass Zviyero 120 # Kugadzira uye Fekitori | OLAN
Fonera Us: 0086-15100663145
Reflective Magirazi eGirazi
Yakapetwa Magirazi eGirazi
Drop On Glass Zviyero
Intermix Glass Zviyero
Kukanda Magirazi eGirazi
Yakakwira Index Zviyero zveGirazi
1.93nd Magirazi eGirazi
2.2 Magirazi eGirazi
Aluminium Yakaputirwa Glass Beads
Ruvara rwegirazi maGirazi
Drop On Glass Zviyero EN1423
Kudonha PaGirazi Mabhesi BS6088B
1.7nd Magirazi eGirazi eMugwagwa ...
Sandblast Glass Zviyero 120 #
Girazi mabhesi e sandblasting ane maficha emakemikari kugadzikana, akakwirira echimakanika masimba uye kuomarara. Dzinogona kuputirwa pachinhu chepamusoro pamwe nemhepo yakamanikidzwa uye inogona kushandiswa pakutsikirira girazi, rabha, plastiki, kuumbwa nesimbi yekukanda kana kutsimbirira. Iyo jetting mabhora yaizobatsira kudzikisa kusimba kwezvinhu zvekumusoro uye kuwedzera kupfeka kugona.
Sandblasting Glass Bead ine hunhu hwehumwe hwakaomarara kuomarara, simba, uye yakasimba makemikari kugadzikana Izvo zvinogadzirwa kubva pasoda lime silica girazi uye inogona kushandiswa sekuputika zvinhu kubvisa zvakawanda zvakasiyana mhando dzepasi kusakwana, kusanganisira simbi yekuchenesa, pamusoro kupedzisa, peening, deburring. Inodzikisira kuoneka kwechero kukuvara, kukwenya, kuremara kudiki mushure mekusvira, kukuya, kana kuona nzvimbo uye kunosimudza ngura yemishonga uye kunobatsira kuwedzera kugona kwekupfeka.
Girazi yegirazi inoputika haikodzeri kurapwa kwekupedzisira kwechigadzirwa chitsva kana se pre-kurapwa pamberi peanotevera makemikari maitiro (electroforming, anodic oxidation), zvakare inofema hupenyu hutsva muzvinhu zvekare, ingave mota yezvinhu, hunyanzvi uye zvekushongedza zvinhu kana zvemukati zvishongedzo.
Kuputika neGirazi Mabheji pasi pekumanikidzwa kuchachengetedza zvigadzirwa pasina shanduko, uye pasina kusvibiswa uye pasina kunyanya kunetseka. Iyo inogadzira inoenderana metallurgia yakachena pamusoro pekupedzisa. Zvakajairika Blasting Zvishandiso senge Aluminium oxide, Jecha, Simbi Shots dzinogona kusiya Chemical Chemical pane yakaputika pamusoro kana ine yekucheka chiito. Girazi mabhesi anowanzo kuve madiki uye akareruka kupfuura mamwe midhiya uye anogona kushandiswa kutarisisa mune inopinza radii yetambo uye zvikamu zvakapfava uko kwakadzika zvakanyanya kusimba kunodiwa. Kupfura Blasting neGirazi Mabheji inogadzirira zvakakwana simbi pamusoro pechero mhando yekupfeka pairi senge kupenda, kuputira enameling kana girazi lining.Girazi magirazi anogona kuve akachengeteka achienzaniswa nemamwe mablast medias. Kuwedzera mabhenefiti egirazi bead blasting inosanganisira kuti iwe unogona kuishandisa kwemashoma macircle vasati vasisina kuchenesa pamusoro. Zvakajairika kuti girazi midhiya midhiya ipedze 4 - 6 macircuit isati yoda kuchinjirwa. Chekupedzisira, girazi mabhesi anogona kushandiswa mukuyamwa kana kumanikidza blast kabhodhi. Izvi zvinoita kuti zvive zvine mutsindo uye zvinogona kubatsira kupa iyo yekufema yekuchenesa midhiya iyo inochengeta yako blast kabhineti inodhura pasi.
Girazi mabhesi anoshandiswa sekuputika zvinhu zvine maficha ekujeka, kuomarara uye kuomarara. Iwo akakodzera kuchenesa uye kupora burrs uye tsvina pane akasiyana mafuru maficha kuitira kuti zvinyorwa zvakagadziriswa zvive nemhedzisiro yakanaka uye kuwedzeredza hupenyu hwavo hwebasa. Kugadziriswa kwayo kunoita kuti ive sarudzo yezvehupfumi. Makemikari hunhu hwegirazi mhangura haupindike uye hauna chepfu, panguva yekushandisa, hapana simbi kana zvimwe zvinhu zvinokuvadza zvinoramba zviri pamusoro peiyo workpiece, uye hazvizokanganisa nharaunda yakatenderedza. Iko kutenderera kwenzvimbo yakatsetseka kunoita kuti irege kuve nekukuvara kwekukanganisa kweanogadzira chaiyo yeiyo workpiece panguva yekuita sandblasting. Imwe yakasarudzika yekushandisa yegirazi bead blasting iri peening, iyo inobatsira simbi zvirinani kurwisa kuneta uye kutsemuka kubva kunetsekana ngura. Imwe ongororo yakawana kuti inogona kuwedzera kuneta simba neinenge 17.14%. Iyo inokupa iwe inokwezva satin kupedzisa uku uchiwedzera kusimba kwechigadzirwa.
Main zvigadzirwa Specification ye sandblasting maererano anotevera tafura:
Aihwa. Dhayamita (um) Inoenderana saeve saizi
1 850-425 20-40
2 425-250 40-60
3 250-150 60-100
4 150-105 100-140
5 105-75 140-200
6 75-45 200-325
Iwe unogona kusarudza hukuru hwakasiyana girazi girazi pakati pe45um-850um maererano nebasa rakasiyana.
High Reflective Glass Zviyero (zveKuputika)
Nemhepo yakamanikidzwa sesimba rakaisirwa, ichi chigadzirwa chinoitwa nekusasa marozari pasi pekumhanya zvakanyanya uye kumanikidza pamusoro peiyo nzvimbo yekushandira peening uye kupora.
Zvimwe zvinangwa zvezvigadzirwa zvinotevera.
1.Bvisa maumbirwo akasiyana siyana ekugadzirisa, kugadzira, girazi, rabha nepurasitiki, kukanda simbi uye extrusion.
2. Bvisa kushushikana kwekushushikana, wedzera hupenyu hwekuneta uye wedzera kusagadzikana kurwisa kurwisa. Semuenzaniso, ndege injini turbo, vane, shaft, undercarriage, dzakasiyana-siyana zvitubu nemagiya, nezvimwe.
3. Geza uye bvisa slitter kumucheto uye burr pane wedunhu ndiro uye epurasitiki-yakavharwa geminate transistors pamberi pe stannum soldering
4. Bvisa madzinde mupiston nesilinda uye upe nzvimbo inopenya nehafu-yekushomeka yezvirapi zvemuchina uye zvikamu zvemota.
5. Bvisa electromotor uye zvikamu zvakaita sechiuno, brashi yemagetsi uye rotor yepakati pekugadzirisa zvinorema
6. Geza uye bvisa burr yesimbi chubhu uye chaizvo-yakanyungudika isina-ferrous simbi chubhu. Shandiswa peening aggrandizement uye makorari pamusoro Whitehead Textile michini zvikamu.
High Reflective Glass Mhemberero dzekuputika
Type Mesh Saizi yezviyo μ m
30 # 20-40 850-425
40 # 30-40 600-425
60 # 40-60 425-300
80 # 60-100 300-150
100 # 70-140 212-106
120 # 100-140 150-106
150 # 100-200 150-75
180 # 140-200 106-75
220 # 140-270 106-53
280 # 200-325 75-45
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Pashure: Sandblast Glass Zviyero 150 #
Zvadaro: Sandblast Glass Zviyero 100 #
Girazi Bead Sandblasting Media
Glass Zviyero zveArasrasive Sandblasting
Glass Zviyero zveSandblasting
Girazi Mabhiza Ezvinangwa zveSandblasting
Girazi Mabhiza Sandblasting
Glass Beads Sandblasting Chinyorwa
Girazi Mabhiza Sandblasting Suppliers
Magirazi eGirazi Anoshandiswa Mumuchina weSandblasting
Girazi Microspheres YeSandblasting
Kuoma 6-7 Mohs Sandblasting Glass Beads
Sandblast Glass Zviyero
Sandblasting Beads Fekitori MuChina
Sandblast Glass Zviyero 180 #
Sandblast Glass Zviyero 60 #
Aluminium Coated Glass Zviyero (1.93nd)
Kukanda Magirazi eGirazi 4.0-5.0mm
Kukanda Magirazi eGirazi 0.8-1.0mm
Ruvara rweGirazi Mabhesi 6-9mm
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.kubvunza
LANGFANG OLAN Girazi MITAMBO CO., LTD
1014, New World Center B2, Aimin East Road, Guangyang Ruwa, Langfang, Hebei, China
Zvita-28-2020 Girazi REMAOKO ABNT NBR 16184: 2013 （Sinalização ho ...
Zvita-28-2020 Girazi REMAOKO ABNT NBR 6831: 2001 CANCELADA - Sinal ...
Mbudzi-23-2020 Kukokwa kweChina Homelife India 2018
Mbudzi-23-2020 Kukokwa kweChina Homelife Dubai 2018
Mbudzi-23-2020 L / C Chiyeuchidzo Chine Njodzi Chinokosha: Varimi Bhangi ...
Mbudzi-23-2020 Kukokwa kweIntertraffic China Shanghai 2019
Mbudzi-23-2020 Yechitanhatu China-Russia Expo, Harbin, China
© Copyright - 2019-2020: LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.